Tweetbot emelitere maka OS X | Esi m mac
Ma anyị enweghị mmelite ọ bụla ma ọ bụ melite onye ahịa Twitter kwa ọnwa. Tapbots bụ onye okike nke ndị ahịa Twitter a na ọ na-emekwa nwere a dịtụ peculiar ụzọ nke-emelite ngwa dị maka ma OS X na iOS. Beenzọ a nke iweta mmelite ka a katọrọ mgbe niile ma ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ m na-echekwa maka ịhapụ ngwa a n'akụkụ mgbe m kwụrụ ụgwọ maka mmelite ma ọ bụ nwee ndị ọrụ Mac na-eche mmelite nke na-abịarutabeghị. na ọrụ ọ na-enye anyị na gịnị kpatara ya, omume nke iji ya ọtụtụ afọ.
Taa ngwa ahụ eruola mbipute ya 2.3 Na mmelite ohuru a kwalitere awa ole na ole gara aga, ọ naghị agbakwunye mgbanwe ndị dị na mbụ ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga nke ọ gbakwunye ọnọdụ Split View dị ka mmụba pụtara ama, mana na ụdị ọhụụ a, onye nrụpụta na-emesi mmekọrịta na ngwaọrụ iOS anyị ike.
Ọ bụ mgbanwe na Igwe ọrụ mmekọrịta CloudKit, na ihe ọ ga-enye anyị bụ ọsọ nke mmekọrịta n'etiti ngwaọrụ. O yikwara ka ha na-elepụ anya n’ihu banyere mmelite ndị ga - eme n’ọdịnihu ma na - eme ka ala dị ntakịrị na njirimara ndị taa egosighi ihe ọ bụla nye onye ọrụ, nke ka njọ na n’ikpeazụ ka ndị na - emepe emepe ga - agbakwunye ndozi.
Na nkenke, ọ bụghị nnukwu mmelite maka Tweetbot maka OS X, mana ọ na - emeziwanye otu akụkụ (n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ) nke m bụ onye ọrụ Tweetbot na OS X na iOS, syncing n'etiti ngwaọrụ na m Mac.
Ị nwere ike budata Tweetbot site ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mac App Store » Tweetbot maka OS X na-emelitekwa
Mgbe ị na-ehichapụ ozi na iOS, anaghị ehichapụ ha na OS X
Chebe Siri Remote nke Apple TV ọhụrụ gị na mkpuchi a